अल्ट्रासोनिक Disintegrators - हिल्सचर अल्ट्रासाउन्ड टेक्नोलोजी
सेल विच्छेदन बायोटेक्नोलजी र धेरै अनुप्रयोगहरूमा प्रोसेसिंग कोषहरू र इंट्रासेल्युलर सामग्री समावेश गर्ने एक साधारण कार्य हो। अल्ट्रासोनिक सेल डिस्टेन्ट्रेटरहरू दक्ष र विश्वसनीय हुन्छन्, जब सेल भित्ता वा प्लान्ट कोषहरू, स्तनपायी ऊतक, जीवाणुहरू, फंगी, यीस्टहरू आदिलाई तोड्नको लागि आउँछ। हिल्सचरले तपाईंलाई कम्प्याक्ट ल्याब आकारका उपकरणहरूबाट बेन्च-टपमा उच्च प्रदर्शन अल्ट्रासोनिक डिस्टेग्रेटरहरू प्रदान गर्दछ। औद्योगिक स्केल सेल क्रसरहरू।
वनस्पति, मम्मेलीयन वा माइक्रोबियल कोशिकामा रहेको सेल निलम्बनहरूलाई एक दक्ष र विश्वसनीय प्रविधिको आवश्यक पर्दछ, जसले सेल भित्ताहरू र झिल्लीलाई अवरोध पुर्याउँदछ र अन्तर्कोशिक सामग्रीहरू यसपछिका प्रक्रियाहरू वा विश्लेषणका लागि उपलब्ध गराउँदछ। अल्ट्रासोनिक सेल डिस्टेन्ग्रेटरहरू मेकानिकल डिइन्टेग्रेटरहरू हुन् जसले दक्षताका साथ कोशिकाहरू फुट्छन् (उदाहरण: तरकारी, पात, काण्ड), ऊतकहरू (उदाहरणका लागि स्तनपायी कोशिका, मांसपेशी, कलेजो, मुटु) र सूक्ष्मजीवहरू (जस्तै ब्याक्टेरिया, मोल्ड, एक्टिनोमिसेट्स, माइक्रो- र म्याक्रो-एल्गे, खमीरहरू) )। अल्ट्रासोनिक विच्छेदन एक शुद्ध यांत्रिक सेल अवरोध विधि हो, जसले कोशिकाको lिसिनको लागि आउँदा Sonication अत्यधिक कुशल र विश्वसनीय बनाउँदछ। तसर्थ अल्ट्रासोनिक सेल डिस्टेन्ट्रेटरहरू प्राय जसो अल्ट्रासोनिक सेल क्रसरहरू, सेल ग्रिन्डरहरू, सेल पल्भिलाइजरहरू वा सेल लाइसिing उपकरणहरू पनि हुन्।
कसरी एक यांत्रिक Disintegrator काम गर्दछ
अल्ट्रासोनिक प्रयोगशाला डिस्टिग्रेटरहरूले औद्योगिक विच्छेदनकर्ताहरूले गरे जस्तै उस्तै यांत्रिक सिद्धान्त प्रयोग गर्दछ। Disintegrator मिक्सिंग प्रणालीहरूले सेलहरू विभाजित गर्दछ, ठोस पदार्थलाई घुलन बनाउँदछ वा तरल मिक्सहरूमा ठोस कणहरू फैलाउँछ। अल्ट्रासोनिक विच्छेदनले एक उच्च-तीव्रता अल्ट्रासोनिक जाँचलाई ब्याच ट्या tank्कमा वा इन-लाइन प्रवाह सेल रिएक्टरमा समावेश गर्दछ। अल्ट्रासोनिक विघटनकर्ता प्रोब धेरै उच्च आवृत्तिमा तरलमा कम्पन हुन्छ र तरलमा तीव्र अल्ट्रासोनिक काभेटेशन सिर्जना गर्दछ। प्रत्येक cavitation बुलबुले पतन शक्तिशाली कतरनी सेना, कि फुटेर कोशिका, फाइबर, agglomerates र पनि कडा कणहरु मा परिणाम। साथै, अल्ट्रासोनिक cavitation ले 1000km / घन्टा को साथ उच्च गति cavitational स्ट्रीमि produces उत्पादन गर्दछ। काभिटेशनल लिक्विड जेट्सले कण एग्लुमेरेटहरू, फुटेको कोषको भित्तामा निहित गर्दछ, स्लरी भित्र सामग्री स्थानान्तरण सुधार गर्दछ र तरल भोल्युम भर घनहरू फैलाउँछ। अल्ट्रासोनिक cavitation क्षेत्र मा, वैक्यूम र 1000बार सम्म वैकल्पिक चाँडै र बारम्बार दबाव। Mix मिक्सर ब्लेडको साथ एक रोटरी मिक्सर वैकल्पिक दबाव चक्र को समान आवृत्ति प्राप्त गर्न एक आश्चर्यजनक 300,000 RPM मा अपरेट गर्न आवश्यक छ। परम्परागत रोटरी मिक्सरहरू र रोटर-स्टेटर मिक्सरहरूले काभेटको कुनै महत्त्वपूर्ण मात्रा सिर्जना गर्दैन किनकि तिनीहरूको गतिमा सीमितता छ।
UP400St – आन्दोलकको साथ सेल विघटनको लागि 400W शक्तिशाली अल्ट्रासोनिक प्रोसेसर
अल्ट्रासोनिक डिस्टेन्ट्रेटरहरू सामान्यतया सेल डिस्टेन्ट्रेटरहरू वा सेल अवरोधकहरूको रूपमा चिनिन्छन्। अल्ट्रासोनिक काभेटेशन भनेको बिरूवा सामग्री वा टिश्युलाई सानो टुक्रा पार्ने प्रभावकारी माध्यम हो। अल्ट्रासोनिक काभेटेशन फाइबरको फाइब्रिलेसनको लागि वा बोटानिकल एक्स्ट्र्याक्सको लागि प्रभावकारी माध्यम हो। ताजा वा सुख्ते सेलुलर सामग्रीहरूको सेल भित्ताहरू सोनिकेटि very गर्न धेरै छनौट गर्न सकिन्छ र विलायकको चयन विघटनको प्रासंगिक कारक हो। अल्ट्रासोनिक विघटनकर्ताहरू कुनै पनि विलायकसँग उपयुक्त हुन्छन्। द्रुत वैकल्पिक तरल दवाबले उच्च-चक्र चक्रको क्रममा सेल झिल्लीको माध्यमबाट तरललाई धक्का दिन्छ, र यसले कम दबाव (भ्याकुम) चक्रको क्रममा सेलबाट तरल निकाल्छ। यो प्रति सेकेन्ड २०,००० भन्दा बढी हुन्छ। दोहोरिएको अल्ट्रासोनिक काभेटेशन तनावले सेल संरचनाहरू कमजोर पार्छ र अन्ततः कोषहरूलाई सानो टुक्रामा फाट्छ, परिणामस्वरूप छिटो र प्रभावकारी सेल विभाजन हुन्छ। यसको प्रभावकारिता Sonication एक विघटन गहन टेक्नोलोजी बनाउँछ।
प्रोब प्रकार अल्ट्रासोनिक उपकरणहरू प्रत्येक प्रयोगशालामा धेरै उपयोगी उपकरण हुन्। एक अल्ट्रासोनिक प्रोब एक सरल ज्यामिति र सफा गर्न सजिलो टाइटेनियम रड हो जसले अल्ट्रासोनिक कम्पनहरूलाई तरलमा जोड्छ। Hielscher आकार को एक विस्तृत श्रृंखला मा अल्ट्रासोनिक प्रोब र सुझाव बनाउँछ। प्रयोगशालामा घोलहरूको सबैभन्दा सामान्य विघटनको लागि ultra,,, १ 14, वा २२ मिलिमिटर टिप व्यासको अल्ट्रासोनिक प्रोबहरू धेरै उपयोगी हुन्छ। अन्य प्रोब आकार र अनुकूलन आकार अल्ट्रासोनिक प्रोबहरू उपलब्ध छन्। प्रयोगशाला विघटनको लागि विशिष्ट अल्ट्रासोनिक उपकरणहरू १०० देखि wat०० वाट अल्ट्रासोनिक शक्तिमा।
UP100H एमएस १ son सोनोट्रोडको साथ प्लान्ट सामग्रीको सेल अवरोधका लागि
हिल्सचर औद्योगिक विघटनकर्ताहरू उच्च शक्ति अल्ट्रासोनिक उपकरणहरू हुन् जुन भारी शुल्क लगातार भ dis्गको लागि डिजाइन गरिएको हो। औद्योगिक अल्ट्रासोनिक प्रोब्जेस फ्ल्यान्जको साथ आउँदछ जुन कुनै पनि अभिमुखिकरणमा इस्पात ट्याks्कहरू, सिसाका भाँडाहरू वा प्लास्टिक कन्टेनरहरूमा चढ्न सकिन्छ। विशिष्ट अल्ट्रासोनिक औद्योगिक विघटन उपकरण प्रति प्रोब १००० देखि १,000,००० वाटको अल्ट्रासोनिक पावरको हुन्छ।
अल्ट्रासोनिक सेल विघटनको लागि साझा उद्योगहरू
जीवविज्ञान / माइक्रोबायोलजी
खाना प्रशोधन (जस्तै, स्वाद निकासी, पोषक तत्व निकासी, बनावट परिमार्जन)
फोहोर पानी उपचार (फोहोर)
हिलस्चर उपकरणहरूको साथ तपाई ब्राउजर रिमोट कन्ट्रोलको माध्यमबाट अल्ट्रासोनिक प्रक्रिया मोनिटर गर्न र समायोजित गर्न सक्नुहुन्छ
बिभिन्न कोषहरू र ऊताहरूको अल्ट्रासोनिक विस्थापनको लागि प्रोटोकोलहरू फेला पार्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्!
कसरी उच्च प्रदर्शन अल्ट्रासोनिक सेल Disintegrators खरीद गर्न
हिल्सचर अल्ट्रासोनिक्स उच्च-प्रदर्शन अल्ट्रासोनिक सेल विघटनकर्ताहरूको लामो समय अनुभवी निर्माता हो। बजार नेताको रूपमा, हिलस्चरले अल्ट्रासोनिक होमोजाइनाइजर डिजाइन र निर्माण गर्दछ। प्रयोगशाला र बेन्चबाट पूर्ण औद्योगिक स्तरसम्म वितरण गर्दछ।
Hielscher अल्ट्रासोनिक्स’ औद्योगिक अल्ट्रासोनिक प्रोसेसर सजिलैसँग धेरै उच्च आयामहरू वितरण गर्दछ, जुन कडा सेल भित्ताहरू तोड्न आवश्यक पर्दछ। हिल्सचर औद्योगिक विघटनकर्ताहरु २ 24/7 अपरेशनमा निरन्तर २००µm को अवधारणाको साथ चलाउन सकिन्छ। अझ उच्च आयामका लागि, अनुकूलित अल्ट्रासोनिक सोनोट्रोडहरू उपलब्ध छन्। थप सामानहरू जस्तै बूस्टर सीsहरू, फ्लो सेलहरू, Sonication रियाक्टरहरू र पूर्ण recirculation सेटअपहरू सजिलैसँग उपलब्ध छन् र तपाईंको प्रक्रिया आवश्यकताहरूमा निर्दिष्ट गरिएको तपाईंको अल्ट्रासोनिक प्रणाली कन्फिगर गर्न अनुमति दिन्छ।
बौद्धिक सेल Disintegrators
हिल्सचर अल्ट्रासोनिक्स उच्च प्रयोगकर्ता मित्रता र अत्याधुनिक तकनीकी उन्नतिका साथ उच्च प्रदर्शन सेल डिस्टेन्ट्रेटरहरूमा फोकस गर्दछ। यसको मतलब यो छ कि हिल्सचर प्रयोगशाला विच्छेदकर्ताको मापदण्ड औद्योगिक मेसिनरीको बुद्धिको लागि अधिक र अधिक अनुकूलन गर्दछ। प्रयोगकर्ताले ब्राउजर रिमोट कन्ट्रोलको माध्यमबाट हिल्सचरको डिजिटल अल्ट्रासोनिकेटरहरू नियन्त्रण गर्न सक्दछ। स्वचालित डेटा रेकर्डि software सफ्टवेयरले सबै महत्त्वपूर्ण अल्ट्रासोनिक प्यारामिटरहरू लेख्छ जस्तै नेट पावर, कुल पावर, आयाम, तापमान, दबाव, समय र मिति CSV फाईलको रूपमा निर्मित SD-कार्डमा। यसबाहेक, अल्ट्रासोनिक विच्छेदनकर्ता निर्धारित समय वा उर्जा इनपुट पछि स्वचालित शट-अप वा पल्सेटिंग सोनिकेशन मोडमा प्रोग्राम गर्न सकिन्छ। प्लग्स्टेबल तापमान र प्रेसर सेन्सरले सावधानीपूर्वक नमूना सर्तहरू ट्र्याक गर्न अनुमति दिन्छ। जैविक नमूनाहरूको तापक्रम-नियन्त्रण प्राय: प्रक्रिया परिणामहरूको गुणस्तरको लागि महत्त्वपूर्ण कारक हुन्छ, त्यसैले हिल्सचरले प्रक्रियाको तापमानलाई लक्षित तापमान दायरामा राख्न विभिन्न समाधानहरू प्रस्ताव गर्दछ।
तपाईं Hielscher अल्ट्रासोनिक disintegrators सबै विभिन्न आकारमा किन्न सक्नुहुनेछ। मेडिकल अनुसन्धानको लागि सानो क्रायो-वायलमा सेल विच्छेदनदेखि स्लरीहरूको अविरल प्रवाह विच्छेदनसम्म, हिल्सचर अल्ट्रासोनिक्ससँग तपाईंको लागि विस्थापनको उचित आकार छ! कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् – हामी तपाईंलाई सबैभन्दा उपयुक्त अल्ट्रासोनिकेटर सिफारिस गर्न खुशी छौं!